Samsung nwere ike iji ụfọdụ iko AR dị ịtụnanya na-arụ ọrụ | Gam akporosis
Dịka ndị hụrụ teknụzụ niile maara nke ọma, asịrị bụ akụkụ nke ụwa a ebe ọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọmụmụ ya. Oge ọ bụla ụbọchị nke ọhụụ ọhụrụ na-eru nso anyị na-enweta ezigbo leak bọmbụ, nsụgharị na ọnụọgụ nke ozi ụfọdụ na-emegiderịta onwe ha. Anyị na-eme obere okwu a n'ihi na, ọ bụ ezie na anyị ga-achọ ka akụkọ ahụ bụrụ eziokwu na anyị ga-ahụ ụfọdụ n'oge na-adịghị anya Anya iko AR si Samsung, o yikarịrị ka akụkọ ahụ ọ nwere ike ịbụ nke adịgboroja.
N'ọnọdụ ọ bụla, site na Androidsis anyị na-ekwughachi ya, n'ihi mmetụta ọ na-enwe. Na n'ihi mgbanwe nke afọ ndị na-adịbeghị anyaỌ dịghịkwa ka ọ bụ mgbasa ozi na-agaghị ekwe omume. Anyị kwenyere na nke ahụ teknụzụ anyị nwere ike ịnweta taa nwere ike ịnwe ike ijide mepụta ngwanrọ mmekọrịta dị adị nke anyị huru.
1 Ihe nzacha vidio nke Samsung iko na AR
1.1 Nke a bụ otu vidiyo nke iko Samsung ndị a na-ekwu maka ya nke ukwuu:
Ihe nzacha vidio nke Samsung iko na AR
Ọ bụ eziokwu na eziokwu augmented technology abụghị ihe ọhụrụ. Anyị enweelarị ike ịhụ ọdịnaya nke multimedia mebere naanị maka iko pụrụ iche. Ọbụna egwuregwu ndị na-eme ka onye ọkpụkpọ ahụ nwee ahụmịhe dị egwu. Ihe bụ ihe ọzọ, typedị ihe ndị a emebeghị nke ọma fọrọ nke nta ka ọ bụla n'ime ụdị nke ọ gbalịrị iji ya mee ihe. Ma ngwa nke eziokwu augmented na-eji kwa ụbọchị, dịka ọmụmaatụ, site na kọmpụta na-arụ ọrụ ọ dị ka ga-aka mma nnabata.
Nke a bụ otu vidiyo nke iko Samsung ndị a na-ekwu maka ya nke ukwuu:
Isi ihe dị iche na anyị achọtala n'etiti iko ihe eji eme ihe nke anyị mara ruo ugbu a na ndị a sitere na Samsung bụ akụkụ anụ ahụ. Anyị niile enweela ike ịhụ ụdị iko a na-ahụ anya nke mebere na o doro anya na ha anaghị arụ ọrụ n'ihi oke na ibu ha. Anyị enweghị ike ichetụ n'eji ụdị ngwa ahụ rụọ "ndụ dị mma". Ọ bụ ya mere iko ọhụụ ndị a ji jisie ike dọta uche dị ukwuu. Agbanyeghi obere, ha nwere ike ịgafe maka iko ndị a na-emebu. Nyere uru ha na-enye, ha ga-aghọ ngwa na-atọ ụtọ. Ì chere na iko ndị a ga-ada n’ahịa ahụ? Ego ole ka ị ga-akwụ maka ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung nwere ike ịrụ ọrụ na ụfọdụ iko AR dị ịtụnanya